Ungayithola kanjani i-intanethi engcono kwi-motorhome yakho? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ukuthola isignali ye-WiFi yeselula ethembekile futhi engaguquguquki kungahle kube nzima lapho uhlala eholidini ekhempini e-motorhome.
I-WiFi yamahhala enikezwa amakamu amaningi isebenza kuphela uma useduze nehhovisi lesayithi. Ama-dongle e-WiFi ajwayele ukuba mahle, kepha angalwela ukuthola isinali elinamandla ngokwanele ezindongeni zekhaya lakho lemoto ngaphandle kokuthi uwabeke ophahleni.
Enye inselelo okufanele ibhekwe ukuthi bangaki abantu abancintisana nomkhawulokudonsa ku-WiFi yekhempu. Isevisi oyitholayo ilingana ngqo nokuthi bangaki abantu abakusohlelo kanye nedatha abayisebenzisayo.
Ukusiza ukuxazulula lokhu, iMaxview idale uhlelo lwayo lweRoam, oluza ezingxenyeni ezimbili: i-antenna yangaphandle elingana nophahla, ne-router yangaphakathi, oyifanela nodonga endaweni efanelekile. Inemisebenzi emibili: ukuhlinzeka ngesiginali ye-3G noma ye-4G nokuxhuma kwi-WiFi hotspot.
UMaxview uncoma ukuthi usebenzise isifaki sobuchwepheshe ukuze ulingane neRoam.
Isifaki esiqeqeshiwe sizokwazi ukuthi sizobhoboza kuphi imbobo, ukuthi siyifaka kanjani i-antenna yophahla ukuze ivalwe futhi ingabi nesimo sezulu, nendawo ekahle yokufaka i-router.
Uma unekhono ku-DIY, ukuzifakela iRoam ngokwakho kulula. Uhlelo lufika - selulungele ukulingana nemiyalo. Uzodinga amathuluzi athile nokusa noma ntambama ukuwufaka.
Ukuba nenketho yokusebenzisa i-3G / 4G noma izindawo ezidonsela kuzo ze-WiFi kusho ukuthi unokuguquguquka kusuka lapho uthola khona ukufinyelela kwe-inthanethi.
Futhi, ukusebenzisa izindawo ezidonsela ku-WiFi kusho ukuthi ungagcina isabelo sakho sedatha.
Ungakuthola lokhu kwi-smartphone yakho noma kwamanye amaphilisi, futhi umehluko omkhulu yisiginali enamandla ozoyithola ku-antenna yangaphandle esetshenziswe ku-Roam.
I-antenna imiswe ngophahla unomphela (endaweni yokuzivikela), ngakho-ke isignali oyitholayo (lokho okubizwa ngokuthi "ukuzuza") kucacile ngokungaphazanyiswa okungavela ezindlini zezimoto noma ezindongeni zekamu.
I-antenna inamandla futhi ixhuma ku-router yangaphakathi (eyenziwe yiTeltonika).
I-router ivikelwe nge-password futhi inikwe amandla isebenzisa i-12V noma i-230V electrics.
UMaxview uncoma i-router ne-antenna ifakwe eduze kakhulu ngangokunokwenzeka, kusetshenziswa okuhlinzekiweizintambo ze-coaxial.
Lapho ubeka khona i-router ngaphakathi kuthinta lapho ufaka khona i-antenna yangaphandle, ngakho-ke zinike isikhathi ukukhomba indawo enhle ngaphakathi.
I-antenna yangaphandle kufanele ibe nesikhala esingu-30cm phakathi kwayo nengxenye elandelayo yophahla ukuze inikeze isignali enhle kakhulu.
Irutha ingahlala ngokuvundlile noma ime mpo odongeni, kepha i-antenna yayo kufanele ime mpo. Beka i-router ngendlela yokuthi kunesikhala esanele esizungezile ukuze i-antenna ime mpo.
Imigwaqo engu-12V no-230V yinde ngokwanele ukuthi inikeze ukuguquguquka okuthile lapho ubeka khona i-router. Kepha, dlala nge-router nokusondela kwayo emthonjeni wayo wamandla ngaphambi kokuzibophezela endaweni yayo yokugcina.
Uma usuthole indawo engcono kakhulu yomzila kanye ne-antenna yangaphandle, hlola indawo lapho uhlela ukubeka khona i-antenna. I-antenna yangaphandle idinga ukuhlala endaweni ehlanzekile, eyisicaba.
Uma ungenayo indawo efanelekile noma ophahleni olunezinhlaka, ungakhathazeki. IMaxview inekhithi yokulinganisa ekhethekile (ethengiswa ngokwehlukana), okuyipuleti elimise okwe-U onamathisela kulo iRoam. Ikhithi efanelekayo ifaka izikrini ngezikulufo ukuvikela intaba ophahleni nophahla lwentambo.
Uma ungadingi ikhithi elifanelekayo, i-antenna yangaphandle ejwayelekile inephedi enamathelayo efakwe kusisekelo sayo kanye nocingo ukuyilungisa ngokuphephile ophahleni. Ukufakwa okujwayelekile kulungele uphahla kuze kufike ku-50mm ubukhulu, okulungele ophahleni oluningi lwezimoto.
Ungahle ube usunephuzu ophahleni lwakho lokufaka intamboizintambo ze-coaxialngokusebenzisa. Ungathenga ikhebuli yokwelulwa ukuze ikunikeze izinketho eziningi lapho ulingana khona ne-antenna.
IMaxview Roam 3G / 4G iqonde ngqo ukuze ilungele abanikazi abaningi futhi izokunikeza ukufinyelela kwi-inthanethi okuzoba umona kwabanye abasebenza ngezimoto esizeni.
IRoam ibiza u- $ 349.99 (uma uyilingana ngokwakho) Isifaki sengeza ezindlekweni. Uma ususebenzise uRoam endlini yakho yezimoto, uzozibuza ukuthi ukwazile kanjani ukuthi ungasebenzisi i-3G / 4G ukufinyelela i-inthanethi kanjena.
Ukuthola ukutholakala kwe-3G / 4G, ufaka iSIM khadi kunoma yimuphi umhlinzeki wenethiwekhi oyisebenzisayo.
Lokho kukunikeza ukuguquguquka kokuxhuma ku-inthanethi ngomhlinzeki wesevisi oshibhile noma onokwethenjelwa kakhulu, noma ngabe use-UK noma uvakashela phesheya.
Ingakanani idatha ye-3G / 4G oyidingayo, uma ingekho kwi-hotspot ye-WiFi, kuya ngokuthi uhlose ukuyisebenzisela ini. Ukusakaza noma ukulanda i-TV kuthatha idatha eningi.
Uma ubuka amavidiyo amaningi thola iSIM ngesabelo esikhulu sedatha. Ngenkathi, ngokulanda ama-imeyili ngaphandle kokunamathiselwe, i-12GB izokwanela ukulanda amashumi ezinkulungwane zazo.
UMaxview uthengisa amakhadi we-SIM khadi avela kuThathu, anokutholakala okuhle e-UK nasemazweni amaningi aseYurophu.
Isizukulwane esilandelayo se-WiFi ephathekayo yi-5G. Njengamanje ukutholakala kwe-5G kuphansi e-UK futhi kuzoba yisikhathi ngaphambi kokuba abahlinzeki benethiwekhi bakhiphe ingqalasizinda ye-5G e-UK. Okwamanje, i-3G / 4G izoba nathi nokujwayelekile iminyaka eminingi kuze kube manje.
Imishini oyidingayo ukufaka uhlelo lweMaxview Roam
IMaxview Roam (Ingxenye no MXL050) kit
2.5mm sokuprakthiza kancane
25mm imbobo isaha
Ukufaka i-antenna yangaphandle
1. Beka isibonisi osinikeziwe endaweni obuyikhombile ngaphambilini. Maka phakathi nendawo yomgodi ophahleni ongu-25mm nangaphandle kwethempulethi ukukhombisa ukuthi uzoyibeka kuphi i-antenna.
2.Bhola imbobo yokushayela engu-2.5mm. Okulandelayo, sebenzisa i-25mm hole saw ukubhola imbobo enkulu. Susa imfucumfucu nesihlabathi kunoma imiphi imiphetho emibi (ukuvimbela ukuheha kuikhebula le-coaxial).
3. Faka ucingo lwe-antenna ngembobo ephahleni kusuka ngaphandle, ukuze ukwazi ukukala ukujula okudingayo ngaphambi kokucheba noma yibuphi ubude obedlulele. Yimake. Kufanele ungene ngaphakathi ukuze ulinganise.
4. Khipha uqinisa bese usebenzisa i-hacksaw yakho, unqume i-3mm eyeqile endaweni ebekiwe. Lokhu kusho ukuthi uzothola ukulingana okuqinile futhi uvimbele ukungena kwamanzi.
5. Ngaphambi kokwenza noma yini enye, hlanza indawo lapho uzofaka khona uthi. Udinga ukususa noma iyiphi igrisi, ulwelwe noma ukungcola.
6. Bese ubeka uthi oluyinhloko lube sesimweni bese uchusha intamboikhebula le-coaxialngembobo. Iphedi enamathelayo ye-3M inamandla, ngakho-ke ungayilungiseli ophahleni uze uqiniseke ukuthi ihambisana kahle nomaka wakho.
7. Ukusuka ngaphakathi, faka intamboikhebulaenkabeni ngocingo. Faka i-clamp emgodini bese uyiqinisa ngokuqinile ukuze uthole uphawu oluphelele.
8. Ekugcineni, thatha isikulufa esingu-no6, usifake emgodini kocingo bese usigoqa ukuze umise ukukhululeka kocingo.
1. Sebenzisa ubakaki wepulasitiki omnyama ukumaka izimbobo zesikulufu usebenzisa ipensela. Ngemuva kwalokho, bhola izimbobo ezimbili zokushayela ngezikulufo ze-no6.
2. Khipha isibambi se-SIM khadi usebenzisa iphini enikeziwe bese uyifaka kwiSIM khadi ofuna ukuyisebenzisa.
3 Manje namathisela uthi oluyi-coaxialikhebulaskuzixhumi 'zeselula' ezansi kwendlela. Bese uxhuma i-antenna ye-WiFi yangaphakathi.
4 Vula i-router ukuze ubone i-SSID nephasiwedi bese uyayibhala. Ungaskena ikhodi ye-QR ukuze uyixhume, njengenye indlela.
5. Faka i-router kubakaki. Hlanza ikhebula phakathi kwamayunithi, xhuma amandla we-230V noma we-12V bese ulungiselela amadivayisi akho ukuxhuma kusiginali ye-3G / 4G.
6. Manje, cinga i-SSID yomzila (usebenzisa ulwazi olukusinyathelo 4) nefoni yakho, xhuma bese uthayipha iphasiwedi. Yilokho kuphela - manje usuxhunyiwe futhi ukulungele ukuntweza!
Umphumela wokufakwa kweblister empilweni yeshalofu